သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် – Grab Love Story
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါ… စေနသား နှစ်ယောက် ပါ… ကျနော်က ထွန်းထွန်း သူငယ်ချင်းက နိုင်ဝင်းပါ တစ်ရပ်ကွက်တည်း တွင် ကြီးပျင်းခဲ့သူများ ငယ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းပြေးလည်းတူတူ.. ရန်ဖြစ်လည်းတစ် ယောက်နှင့်ရန်ဖြစ်သူကို တစ်ယောက်ကဝိုင်းချ ခဲ့လောက်အောင် ကျနော်တို့ ခင်မင်ကြသည်။ သူက ငယ်ငယ်ထဲက မိန်းမ များကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ ကောင် ပါ…သူ့ ကြောင့်ကျနော်လည်း မိန်းမများကို စိတ်ဝင်စား တတ္လာ သည်… တခါတခါ ကျနော်တို့နှစ် ယောက် ဘေးအိမ်က မိန်းမများရေချိုးသည်ကို တူတူချောင်း ကြသည်..ကောင်မလေးများ မိန်းမ မ်ားကို တူတူပစ်မှားကြသည်။ မိန်းမများအကြောင်းတူတူ အားပါးတရ ပြောတတ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ ပစ်မှားသည့်မိန်းမများတွင် လင်ရှိမိန်းမများ… ကေလးအေမမ်ား လည်းပါသည်။
ကျနော်တို့မိဘများက အစိုးရဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသည်… ငွေကြေးအားဖြင့် မချမ်းသာကြ ပါ.. ဒါကြောင့်လည်း အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်မှီမှာပင် ကျနော်တို့ ပညာရေးကိုစွန့်ခွာခဲ့ကြပါသည်.. ရန်ကုန်မြို့က ဟော်တယ် တစ်ခုတွင် အတူတူပင်အလုပ်ရကြပါသည်။ ဟိုတယ်မှာပင်နေသည်..ကျနော်တို့ ၂ ယောက်မှာ ဝန်ထမ်းများထဲတွင် အငယ်ဆုံး ဖြစ် သဖြင့်အားလုံးကို လေးစားစွာဆက်ဆံရပါသည်… မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နှင့်အလုပ်ထဲကိုရောက်လာသူ မ်ား ဖြစ်သည့်အတွက် အားလုံးကို သင်ယူကြရပါသည်… အရင် က ဟိုတယ်ဆိုသည်မှာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ သူ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် တဖြေးဖြေးချင်း လုပ်ငန်းတွေကိုနားလည်လာခဲ့သည်။ ဟိုတယ်မှာအသားကျလာတယ်… ဟိုတယ်မှာလုပ်တဲ့သူတိုင်းက တျခား အလုပ်တွေမှာလုပ်တဲ့သူတွေထက် မိန်းမ- ယောကျားတွေအကြောင်း ကို ပိုသိကြပါတယ်..မိန်းမဆိုတာ ဟိုတယ် လုပ်ငန်းနဲ့မပတ်သက် လို့ကိုမရဘူးလေ… အလုပ်တွေကိုနားလည်သလို မိန်းမတွေကိုပိုစိတ်ပါဝင်စားလာခဲ့သည်…ခန အချိန်ပိုင်းလာတည်းသူစုံတွဲများ.. ကိုလည်းတွေ့ ရင် အားက် ကာ စိတ်ထဲအကြီးအကျယ်ပစ်မှားတတ်လာသည်..ကျနော်ကလည်း ကျနော် ပစ်မှားသည့် ဆော်များကိုလည်း နိုင်ဝင်းအားပြောပြတတ်သလို..နိုင်ဝင်းကလည်းသူစိတ်ထန်သည့်မိန်းမ မ်ား ကိုလည်း ကျနော့ကို ပြောပြတတ်သည်… ဟိုတယ်ကလည်းနေစရာပေးသဖြင့်ကျနော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအိမ်မပြန်ကြတော့..အမေ့ကိုတော့လခ ပေးသည့်အချိန်က လြဲ၍ မပြန်ကြဘဲ အလုပ်မှာပျော်နေကြသည်။ ဟိုတယ်မှာလည်း သူငယ်ချင်းများရလာပါတယ်. တစ်ရက် မန်နေဂျာကြီး မွ ကျနော်တို့ နှစ် ယောက်ကိုခေါ်သဖြင့် သူ့ရုံးခန်းသို့သွားရသည်…သူဌေးလည်း ရောက်နှင့် နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
သူဌေးမှာ မြန်မာပြည်မွေးတရုပ်လူမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ သူမျက်နှာထားကို ကြည့်လိုက်ရတာနဲ့ အားလုံးက ကြောက်ရ မည့် ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ မင်းတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချလို့ အခု မာဆတ်၂ခန်းမှာအလုပ်ခိုင်းမယ်.. လို့ ဂျာကြီးက စပြောပါတယ်.. ဟုတ်ကဲ့..ရပါတယ် ကျနော်တို့ ၂ ယောက် တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြပါတယ်..ကျနော်တို့ ဟိုတယ်မှာက အတြဲ တွေလည်းလာကြတာများတယ်..အချိန်ပိုင်းအတွဲတွေ ဆိုတာ ခနခန လာလွန်းလို့ ကျနော်တို့ အားက်ခဲ့ရတာ တွေ …ကိုယ်လည်းအဲလို ကာမအရသာခံစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို မနည်းထိန်းနေရတဲ့ ကျနော်တို့ စိတ်ထဲ လန့်သွားမိပါတယ်..ရင်လည်းခုန်လာပါတယ်.. ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့လည်း ဟိုတယ်မှာ ဆီလိမ်းမာဆတ်အခန်းဖွင့်ဖို့လိုတာတွေ လုပ်ပေးရင်းနှင့် တစ္လ လောက်ကြာ သွားပါတယ်..ဟိုတယ္က ၇ ထပ်ဆိုတော့ ၅ ထပ်မှာအဲလို အခန်း ၁၀ ခန်းယူလိုက်ပါတယ်… ဟိုတယ်ဆိုတာ အခန်းက အျမဲလိုလို ပိုနေတာဆိုတော့ အခန်းလွတ်မထားတဲ့ သူဌေးကိုလည်း စိတ္က ချီးကျူးမိပါတယ်.. ဆီလိမ်းမာဆတ်ဆိုတာသိကြမှာပါနော်…ဧည့်သည်က.ခါးမွာ ပုဝါဘဲပတ်ထားရတယ်… ဆီနဲ့လိမ်းပေးတာလေ တစ္ကိုယ္လုံးကို ..ယုယုယယနဲ့ ပေါ့နော်.. အသာအယာလေး နှိပ်ပေးရတယ် မာဆတ်ခန်းက ထူးခြားတာက တံခါးမွာ အတွင်းကိုကြည့်နိုင်တဲ့အပေါက် တွေပါတယ်..အထဲက ဘာဖြစ်နေ တယ် ဆိုတာ အပြင်က လာကြည့်နိုင်တာအောင်လုပ်ထားတာပါ…နောက်ပိုင်းကျနော်တို့ အတွက် ချောင်းကြည့်လို့ ရတာပေါ့လေ ကျနော်တို့ က ငပိန်းတွေဆိုတော့..မာဆတ် ကောင်မလေးတွေကိုဘယ်လိုရှာရမလည်းဆိုတာ မစဉ်းစား တတ်ကြ ဘူး..ဂျာကြီးက နောက်ရက်ကျတော့
မနက်ဖန် ၁၀နာရီ မွာ ကောင်မလေးတွေ လာမယ်.လူရွေးရမယ်
နောက်တစ်နေ့ရောက်တော့ ဟိုတယ္ကို အလျှိုအလျှိုရောက်လာကြတာ… ကောင်မလေး ၁၀ ယောက်လောက် ပေါ့..ထိုင်စောင့်ခိုင်းတားပြီး ဂျာကြီးအခန်းထဲ ကိုအလှည့်ကျလွတ်ရတာပေါ့..လာတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်လိုက်…စိတ်ထဲကပစ်မှားလိုက်နဲ့ပေါ့… ကောင်မလေးတွေထဲက ပုံမလာပန်းမလာ ၂ ယောက်လောက်ကိုမရွေးဘဲနဲ့ ကောင်မလေး ၈ ယောက်ကိုရွေးလိုက် တယ်လို့သိရတယ်,, ကျန်တဲ့ကောင်မလေးတွေက အလုပ်ခန့်ထားလို့ ဟိုတယ်မှာနေရတယ်.. မာဆတ်ကောင်မလေးတွေထဲမှာကျနော်က ပုသိမ္ကလာတဲ့ အေးအေးခိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားမိသလို…နိုင်ဝင်းကလည်း ပြည်ကလာတဲ့ ကုလားဆင်ကောင်မလေး ကြည်ကြည် လွင် ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်.. ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်က အဲအချိန်မှာ.. အပြင်မှာ ကောင်မလေးတွေနဲ့အတူတူအိပ်ပီးဘီ… တစ်လတစ်ခါ လောက်တော့ နေဖြစ်တယ်… မဟုတ်တာလုပ်ရင် ကျနော်ကလည်းသူပါမှ လုပ်တယ်..သူကလည်းကျနော်ပါမှ လေ…တခါတခါ… ကောင်မလေးတစ်ယောက်တည်းကို ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက2in 1 ဆွဲတာလည်း ရှိတယ်… ပြောချင်တာက နှာထလာရင် ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးအရှက်ကိုမရှိတာ..သူ ကောင်မလေး ကို စားရင်လည်းကျနော်က ဘေးကကြည့်သလို..ကျနော်ကောင်မလေးကိုစားရင်လည်း သူက ဘေးက ကြည့် တယ်.. တူတူစားရတဲ့အခါ မရှက်ကိုမရှက်တော့တာ..အိပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေက လိုင်းတွေ ပါ.. ကိုယ့်ရည်းစားတော့ မဟုတ်သေးဘူး…ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့ ၂ ယောက်မရှက်ကြတာလို့ထင်တယ် မာဆတ်ခန်းဖွင့်မှ ကျနော်တို့ လည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ကာမ သောင်းကျန်းသူတွေများတယ်..ဆိုတာကျနော်တို့ သိလာ ရတယ်… လာတဲ့ဧည့်သည်တွေထဲမှာအသက်ကြီးကြီးလူကြီးတွေလည်းပါတယ်..လူလတ်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်…လာတဲ့လူတိုင်းက မိန်းကလေး က သူတို့ တစ္ကိုယ္လုံးကို နှိပ်နယ်ကာ လက်နဲ့လုပ် လုပ္တာ ခံချင်လို့လာတာပါ… ဆက်ရှင်တခါက တစ္နာရီ ပါ..နှစ်ဆက်ရှင်ယူမဲ့သူလည်းရှိပါတယ်… ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံအရ ဆက်ရှင် စပြီး နာရီဝက်ကြာရင် ဇတ်လမ်းစပြီ.. အဲအချိန်မှာ ဧည့်သည်က ထုခိုင်းပီလေ.. အဲအချိန်ချောင်းရင် မသိ ကြဘူးလေ… ကျနော်တို့ ဆီက ကောင်မလေးတွေအကုန်လုံး ဧည့်သည်ကို လက်နဲ့လုပ် လုပ်ပေးဘူးကြတာချည်းဘဲ… ကျနော်တို့ ချောင်းတာလည်း သူတို့တွေသိကြတယ်..ပထမေတာ့ စိတ်ဆိုးကြတယ်.. နောက်ပိုင်းကျတော့လဲ အချောင်းခံရတာ ရိုးသွားကြတယ်… တခါတခါကျရင် ခပ်ကြောင်ကြောင်ဘဲကြီးတွေကို သူတို့ လက်နဲ့လုပ် လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ… ကပ်စေးနည်း ဘဲ နှာဘူးကြီးတွေအကြောင်းကို ကျနော်တို့ ပြောရီတတ်ကြတယ်.. ကျနော်နဲ့ လည်း အေးအေးခိုင်တို့ ပိုခင်လာ သလို.နိုင်ဝင်းကလည်း ကြည်ကြည် လွင် နဲ့လည်းပိုခင်လာတယ်.. ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ က လူချင်းခင်တာဘဲ..သူတို့တွေနေ့တိုင်းဧည့်သည်တွေကို . လက်နဲ့လုပ် လုပ်ပေးခဲ့ရတာတွေ ကို ကျနော်တို့သိပေမဲ့ ခင်လာတာကြာတော့လည်း.. သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ အထင်သေးတာမျိုးလည်းလုံးဝကို မျဖစ္တာ..ကျနော်တို့ဆိုင်မှာဆီလိမ်းမာဆတ်ကိုလုပ်တဲ့ ကောင်မ လေး ၁၂ ယောက်လောက်ရှိတယ်..ကျနော်တို့ အကုန်ကိုချောင်းဘူးတယ်.. လာတဲ့ ဘဲ ကြီးတိုင်းလိုလိုက လက်နဲ့လုပ်ပေးတာကိုခံကြတယ်… ဘဲက ရစ်တယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့က ကြားဝင်ပေးရတာလည်းရှိပေမဲ့နည်းပါတယ်.. ဧည့်သည်ပါးရင် ကျနော်တို့ထိုင်စကားပြောနေတတ်တယ်… ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း တွေပေါ့… အေးအေးခိုင်နဲ့ ကျနော်ကစကားပြောတာများတယ်..သူ့အိမ်အကြောင်း..သူ့မိသားစုအကြောင်းပေါ့… ကျနော်လည်း သူ့ကိုပိုခင် လာတယ်..တိုတိုပြောရရင် ခ်စ်သူဘဝကို ရောက်ခဲ့တယ်… ကြည်ကြည်လွင်နဲ့နိုင်ဝင်းလည်း ချစ်သူမဖြစ်သေးပေမဲ့ တော်တော်ကို တွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်.. ချစ်သူဘဝရောက်ပေမဲ့ကြည်ကြည်လွင်ကို ကျနော်မနမ်းဘူးသေးဘူး..ကျန်တာကလည်းဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး.. သေချာတာကတော့သူကအပျိုစစ်သေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျနော်သိတယ်.. လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို သူလက် နဲ့ လုပ်ပေးတာက တော့မုန့်ဖိုးရချင်လို့ဆိုတာ ကျနော်သိတယ်..ထူးဆန်းတာက ကျနော်စိတ်ထဲ သဝန္တို တာ မျိုး တော့မရှိဘူး..အလုပ်သဘောလို့ဘဲ သဘောထားတယ်..ဒါနဲ့နိုင်ဝင်းကို ပြောပြတယ်..
ငါ နဲ့ကြည်ကြည်နဲ့ ဖြစ်နေပီ..သူငယ်ချင်း ငါသိတယ်..မင်းတို့ ကို ကြည့်တာနဲ…မင်းအတည်လား..အေပ်္လာား… အင်း..အတည်လို့တော့ထင်တာဘဲ…သူနဲ့ငါနဲ့နားလည်မှုရှိတယ်… အင်း…ကြည်ကြည်ကစိတ်ထားကောင်းပါတယ်… သဘောကောင်းတယ်…မင်း နဲ့အဆင်ပြေမှာပါ… အဲနေ့က သူနဲ့ အေးအေးခိုင်လည်း ချစ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတယ်.. အေးအေးနဲ့လည်း သူလည်း ပြေလည်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်
သူလည်း အေးအေးခိုင်ရော ကြည်ကြည်ကို ဧည့်သည်တွေကို လက်နဲ့လုပ်တာ ချောင်းဘူးတာဘဲလေ….ကျနော်တို့ ၂ ယောက်စလုံးက ကိုယ့်ချစ်သူတွေက တခြားသူတွေရဲ့ငပဲတွေကိုကိုင်ပီး လက်နဲ့လုပ်ပေးရတာကို ဘယ္လိုမွ မေနဘူး.. ၂ နှစ်လောက်အဲဒီဟိုတယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်… ကျနော်က အေမ့ဖက္က အမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ ကျေးဇူး ကြောင့် ကားတစ်စီးဝယ်ဖြစ်တယ်..တက်ဆီ ဆွဲဖြစ်တယ်… နိုင်ဝင်းကလည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ သူဌေးရဲ့ လူယုံ ဖြစ်သွားတယ်…သူနဲ့ကျနော်နဲ့ကတော့တွေ့ဖြစ်တယ်.ကြည်ကြည်နဲ့အေးအေးတို့ကတော့ ဟိုတယ်မှာဘဲ ကျန်ခဲ့ တယ်.. ကျနော်တို့နှစ်ယောက်တွေ့ရင် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိစ္စလည်းပြောဖြစ်တယ်…ခက္တာက ကျနော်တို့နှ စ်ယောက် စလုံးက အိမ်တစ်လုံးဝယ်နိုင်ဖို့ကိုပိုက်ဆံမရှိကြသေးဘူးလေ..ကြည်ကြည်နဲ့ အေးအေးကို လည်း ဟိုတယ်မှာ ဆက်မလုပ်စေချင်တော့ဘူး… သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပီးတော့ မြို့စွန်က တိုက်ခန်းကျဉ်းလေးတစ်ခု နှစ်ချုပ်နဲ့.. ငှားဖြစ်တယ်.. အိမ္ဌားခကို တစ်ယောက်တစ်ဝက် ခံတာပေါ့.. အတိုချုံးပြောရရင်… ကြည်ကြည်နဲ့ ကျနော်နဲ့ လက်ထပ် လိုက် ကြတယ်..နိုင်လင်းကတော့..ကျနော်တို့ယူပီး နောက်တစ်လ လောက်မှ လက်ထပ်ဖြစ်တယ်
ကျနော် ကြည်ကြည်ကိုလက်ထပ်ပီး အိမ်ကိုခေါ်လာတယ်…တိုက္က ကန်ထရိုက်တိုက် လေ .ဟောခန်းပုံစံပါဘဲ.. ကျနော်တို့ညားခါစ လင်မယားပျော်နေတာပေါ့နော်…နိုင်ဝင်းက ကျနော်တို့ညားခါစ လင်မယားလွတ်လပ်အောင် အပြင်မှာသွားအိပ်ပေးတယ်..ည၇နာရီလောက်မှာကျနော်က ကြည်ကြည်ကို နမ်းတယ် ..ကြည်ကြည်ကလည်း ပြန်နမ်းတယ်…ပထမဆုံးညမွာ ကျနော့်လီးကို စုပ်ပေး..ကျနော်က သူ့စဖုတ်ကိုယက်ပေး…. အဲညမွာ ကြည်ကြည်အပျိုစင်ဘ၀ကို ကျနော် ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်… ကိုယ်ရတဲ့မိန်းမက အပျိုစစ်စစ်ဆိုတာ သိရတော့ဝမ်းသာမိတယ်.
. မိန်းမ တစ်ယောက်နဲ့ အဝတ်မပါဘဲ အတူတူအိပ်ရတာ ကို ကျေနပ်မိတယ်… နေ့ခင်းပိုင်းမှာလည်း သူနဲ့ကျနော်ဘာအဝတ်မှ မဝတ်ဘဲဖင်ပြောင်နဲ့ အိပ်ရာထဲမှာနေကြတယ်…ကျနော့ဘ၀ မွာ စောက်ပတ် ယက်ချင်နေတာကြာလှပီ အခုမွဘဲ .ကြည့်ကြည့်ကို ယက်ပေးရတော့တယ်…သူကလည်း ကျနော့်လီးကို မှုတ်ပေးတယ်..
ကြည်ကြည်ဘောဒီကို ပြောပြမယ်..အရပ္က မနိမ့်မမြင့်..အသားဖြူတယ်..နို့တွေက တော့လုံးပီးတင်းနေတာဘဲလေ..ဖင်ကတော့တောင့်တယ်…. စဖုတ္က တော့ အမွှေးထူထူဘဲ…စမြင်ခါစ က လန့်တောင်သွားတယ်…
ကျနော်ကတော့ပိန်ပိန်ပါးပါး…. အရပ် ကေတာ့ မြင့်တယ်လို့ ပြောရမယ်..
ပျော်စရာဘဲ..နိုင်ဝင်းပြန်လာတော့လိုးပီးခါစ …အ၀တ်တောင်မ၀တ်ရသေးဘူး…. တံခါးခေါက်သံကြား တော့… သူကအိပ်ရာကထ… ပီးဘရာဇီယာဝတ်မလို့လုပ်တော့ ..မဝတ်နဲ့….ဆိုလို့သူမဝတ္ဘူး.. အိမ်နေရင်းစကတ်ဂါဝန် အတိုဘဲ ဝတ်လိုက်တယ်…
(အေး… သာယာတာပေါ့ကွာ…အခုလေးတင်.. ညစာစားထားတာလေ..ထမင်းတော့မဟုတ်ဘူး )လို့ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ရွက္လို့ မျက်နှာရဲနေတာဘဲ… ကြည်ကြည်က အောက်က ဘရာဇီယာမပါဘူး… စကတ်ကလည်း မရှည်ဘူးဆိုတော့..ကြည်ကြည်ရဲ့ပေါင်တွေ တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတယ်..ယောက်ျားတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကိုယ့်မိန်းမ ပေါင်တစ်ဝက်လောက်ပေါ်နေတာကို ကျနော် ဖီလင်လာတယ်..နိုင်ဝင်းဆိုတဲ့ကောင်က ငယ်ပေါင်းဘဲ လေ…မကြည့်ဘဲဘယ်နေမှာလည်း..ကျနော့်မိန်းမမို့လိုသာ..သူမကြံတာပါ..ကြည့်တာက တော့ ကြည့်တောပေါ့
နိုင်ဝင်းက အရက်နဲ့ အမြီး ဝယ်လာတယ်…ကြည်ကြည်ကို နိုင်ဝင်းက သောက်မလားလို့ ပြောတော့ ကြည်ကြည်က ကျနော့မျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်သောက်တယ်….နဲနဲသောက်လိုက်လေလို့ ကျနော်ကပြောတော့ ကြည်ကြည်လည်း သောက်ပီးမျက်နှာရှုံမဲ့ပီးသောက်ဖြစ်တယ်….ပထမ တစ် ခွက်ပီးတော့ဒုတိယတခွက်သောက်ဖြစ်သွားတယ်… အရက်ကလေးဝင်လာတော့စကားဝိုင်းကပိုစိုပြေလာတယ်..ပိုရင်းနှီးလာတယ်…ကြည်ကြည်နဲ့ နိုင်ဝင်းလဲ..စလိုက် နောက်လိုက်ပြောင်လိုက်ပေါ့…
နိုင်ဝင်းကလည်းမူးလာတယ်…(ကြည်ကြည်..စိတ်မဆိုးနဲ့..နင်ဟိုတယ်မှာ လုပ်တုန်းကနင့်ယောကျားနဲ့ငါ နင့်ကိုချောင်းကြည့်ဘူးတယ်ဟ) (ကိုနိုင်ဝင်းကလည်း..တော်တော်ဆိုးတာဘဲနော်..) ကြည်ကြည်က ရီပြီး ပြောသာပြောနေရတာ.. မျက်နှာကိုနီရဲနေတာဘဲ
နိုင်ဝင်းဘာကိုဆိုလိုမှန်းကျနော်လည်းသိတယ်…ကြည်ကြည်လဲသိတယ်…ရီကြ..မောကြနဲ့ ကျနော်တို့ ညပိုင်းကုန်သွားတယ်…ကြည်ကြည်ကတော့တော်တော့ကိုမူးလာတယ်…
နောက်နေ့မနက်ကျတော့ ကျနော်နိုးလာတယ်.. ကြည်ကြည်ကလည်းဘေးမှာအိပ်နေတုန်း.. ကြည်ကြည်ကိုဖက်ပီးကျနော် ကနမ်းလိုက်တယ်…ကြည်ကြည်ကလည်းပြန်နမ်းတယ်…. သူ့နို့ ကလေးတွေ ကိုင်လိုက်တာနဲ့ ကျနော်လည်းလီးတောင်လာတယ်…ကျနော်လီးကိုသူက ကိုင်ထားတော့. ကျနော့်လီး တောင်လာတာကိုသူကသိတယ်…စဖုတ်ကိုလက်နဲ့စမ်းလိုက်တော့စိုနေတယ်..
ကျနော်သူ့အပေါ်တက်ခွတော့ သူက နိုင်ဝင်းရှိတယ်လို့ မေးငေါ့ပြတယ်…ကျနော်က မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး သူ့ကိုဆက်ခွတယ်..သူ့စကတ်ကိုလှန်တယ်..သူကရုန်းတယ်…ရုန်းပေမဲ့ ကျနော့အားကို မရဘူးလေ.. အသံမထွက်အောင်ရုန်းရင်းနဲ့ သူ့စဖုတ်ထဲကိုကျနော့လီးက ဝင်သွားပီ.. ဆယ်ချက်လောက်စောင့်လိုက်တော့ သူမရုန်းတော့ဘူး..ကျနော့လိုးတာကို အားရပါးရခံနေပီ…က် နော်က ကျနော့ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပီး အားရပါးရလိုးတော့တာဘဲ..အဲအချိန်ကျနော့စိတ်ထဲမွန်နေပီ…ကြည်ကြည်ကလည်း ကျနော့ လုပ္တာကို ဖီးတက်နေပီ…သူ့စကတ်ကို ချွတ် တော့ရုန်းသေးတယ်….ကျနော်အတင်းချွတ်ပီး အေဝးကို လွင့်ပစ်လိုက်တယ်…
ကျနော့မိန်းမကို နိုင်လင်းအိပ်နေတဲ့ဘေးမှာ ဖင်ပြောင်လိုးနေပီ ကြည်ကြည်က နိုင်လင်းအိပ်တာကိုနိုးသွားမှာ စိုးတယ်နဲ့တူပါရဲ့…အလိုးခံရင်း နဲ့နိုင်လင်းနိုးမနိုးကို လှမ်းကြည့်တယ်.. ကျနော်ကတော့ဒါကို မသိတော့ဘူး.. လူကလည်းမွန်နေပီလေ
အခုအချိန်သာ နိုင်လင်းနိုးလာရင် ကြည်ကြည်ကိုကျနော်လိုးနေတာကို တွေ့မှာဘဲ..ကြည်ကြည်ဖင်ကိုကော..စဖုတ်ကိုရော..ကျနော့်လီးဝင်နေတာကို အတိုင်းသာ မြင်မှာဘဲလေ
နောက်ဆုံးတော့…. ကြည်ကြည်သာပီးသွားတယ်..နိုင်လင်းကတော့မနိုးဘူး..ကြည်ကြည်လည်း အဲတော့မှစိတ်သက်သာရသွားတယ်…
နောက်ပိုင်း ကျနော်တို့ လင်မယား လိုးကြတယ်..ညဆိုရင်အသေလိုးတယ်..အရှက်တွေလည်းကုန် လာကြတယ်… ကျနော်အံ့သြတာက ကြည်ကြည်က လိင်ကိစ္စကိုအရမ်းစိတ်ပါတယ်.. ရမက်ထန်တယ် ဆိုတာအရင်က မသိထား ဘူး… … ကြည်ကြည်ကလည်း ကျနော်လိုးချင်တာနဲ့ အဆင်သင့်ဘဲ… နဲနဲနမ်းလိုက်တာနဲ့ စိတ်ပါလာတာများတယ် ကြည် ကြည်ဒီလောက်ထန်မဲ့မိန်းမလို့ကျနော်မထင်ထားဘူး…ကျနော်တို့လည်း တစ် ယောက်ကိုတစ် ယောက်ပိုချစ်လာတယ်..အရွက်ဆိုတာ ဘာလည်းလို့တောင်မေးရမဲ့ အခြေအနေကိုတောင်ရောက်လာတယ်…
တစ်နေ့ကြည်ကြည်ကိုကျနော်လိုးနေတုန်း …. ကြည်ကြည်က ကျနော့်ကိုမေးတယ်.. (အကို..ကြည်အရင်က လက်နဲ့သူများဟာတွေ လုပ်ပေးတာ အကိုသိတယ် နော်…) (သိတယ်လေ..အကိုနဲ့နိုင်ဝင်းတောင်ချောင်းဘူးတယ်.). (အင်း…..အကို စိတ်ထဲ ရွံနေမှာစိုးလို့ ..စိတ်မသန့် ဖြစ်မှာအရမ်းစိုးရိမ်တာလေ) (မရွံဘူး…).. (အင်း…..) (မှုတ်ပေးဘူးလား..သူတို့ကို) ကြည်ကြည်ပြန်မဖြေဘဲငြိမ်ကျသွားတယ်…. ကျန်ောထပ်မေးတယ်… (မှုတ်ပေးဘူးလား ) ကြည်ကြည်မဖြေဘူး… ငြိမ်နေတယ်.. ကျနော်ဆက်လိုးနေတယ်.. လီးကိုသူ့စဖုတ်ထဲသွင်းနေတယ်.. (အကိုသိချင်တယ်ကွာ….) လို့ ထပ်ပြောလိုက်မှ (အင်း…..) လို့အသံတိုးတိုးလေးပြန်ဖြေတယ်…. ထူးဆန်းတာက ကျနေ့ာမိန်းမ က သူမ်ားလီးကို ကိုင်ဘူးတာ… မှုတ်ပေးတာ ပြောတာ. .ကျနော့်ရင်ထဲ..ခံစားချက်တစ်မျိုး..ဖိန်းတိန်းတိန်း… လီးထဲကို သွေးပို ရောက်လို့လားမသိဘူး… ပိုကြီးလာတယ်..လီးကပိုမာ..ပိုကြီးလာတယ်
(မှုတ်ပေးဘူးလား… အင်းလို့မပြောနဲ…..) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်…) (အိုး………………..)
(မှုတ်ပေးဘူးလား…) (မှုတ်ပေးဘူးတယ်….) (ထပ်ပြော..ကြားချင်တယ်….သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးဘူးလား)
သူများလီးတွေကိုမှုတ်ပေးခဲ့တဲ့ကျနော့်မိန်းမနှုပ်ခန်းတွေကိုနမ်းမိတယ်..(ချစ်တယ်…ကြာ…. ကြည်ကိုချစ်တယ်ကွာ..) (အကို့ကိုလည်းကြည်ချစ်တယ်…)အဲနေ့က ကျနော်အရမ်းလိုးသလို ကြည်လည်း ပီးတာ ၃ ခါတေင်ပြီးတယ်…
ကျနော်က ကျနော့မိန်းမကို ဘာဝတ်ဝတ် ကျေနပ်တယ်..အဖွားကြီးလေးလို မ၀တ်ရင်ပီးရောလေ
တက်ဆီလေးဆွဲတာကလည်း အဆင်ပြေတယ်..ကိုယ့်ကားဆိုတော့လည်း နင်းကန်မ မောင်းပါဘူး.. ညပိုင်း တက်ဆီဆွဲရင်လည်း ကြည်ကြည်လည်း ပျင်းလို့ဆိုလိုက်စီးတဲ့အခါလည်းစီးတယ်…အဲအခါမျိုးဆို လူကြည့်လိုက်တာပါ..မသင်ကာစရာ ပုံစံမျိုးဆိုရင်.. မလိုက်တော့ဘူး..ကြည်ကြည်ကလည်းပါလာ တေ့ာ သတိထားရတာပေါ့…
ကျနော်က အကြံနဲ့ ကြည်ကြည်ကိုခေါ်တာလေ..အိမ်မှာကတော့ နေရာမျိုးစုံမှာလိုးပီး ဘီ.. ရေချိုးခန်းထဲမှာလည်းလိုးတယ်… မီးဖိုချောင်ထဲမှာလည်းလိုးတယ်. .ကားပေါ်မှာမလိုးရသေးဘူး.. ကားထဲမှာလိုးဘူးချင်တယ်..စိတ္က လေ…
ခရီးသည်လိုက်ပို့ပီး အပြန်မှာ အရမ်းမှောင်တဲ့ ကျောက်ကုန်းဘက် က လမ်း တစ်လမ်းဘက် ကို ကားကိုမောင်းလိုက်တယ်… သစ်ပင်အောက်မှာကားရပ်လိုက်တော့.. ကြည်ကဘာလို့ရပ်တာလည်းအကိုလို့ မေးတော့ ဘာမွ မပြောဘဲ သူ့ကိုစနမ်းလိုက်တယ်..သူက လည်းပြန်နမ်းတယ်လေ
Crd; Lin Lin
အစိမ်းအိုးလေး လိုးနေပြီ “” (စ_ဆုံး)